बिचरा ! हेर्नुस बिदेशी जस्तै देखिने बिराटनगरमा बस्ने गोरो परीवार , गोरो भएकै कारण कसैले नपाएको दु'ख पाए (भिडियो सहित) - Hamro Abhiyan
बिचरा ! हेर्नुस बिदेशी जस्तै देखिने बिराटनगरमा बस्ने गोरो परीवार , गोरो भएकै कारण कसैले नपाएको दु’ख पाए (भिडियो सहित)
मोरंग । बिराटनगरमा बस्दै आउनु भएको एक गोरो परिवारको बिषयमा तलको भिडियो प्रस्तुत गरिएको छ । महतो परिवारमा ५ जना सदश्य छन् । ५ जना सदस्य सबै जना गोरो देखिनछन् । मान्छेहरु बाटो हिड्दा झुकिएर फोटो खिचेको उनीहरु बताउछन् । महतो परिवारमा ३ जना छोरि र बुबा आमा रहेका छन् । गाउँका मान्छेहरु पहिले हामीलाई देख्दा अचम्म मान्थे भन्दै उनीहरु बताउछन् ।
काजोल महतो जेठी छोरी हुन् , यो भिडियोमा हामीले परिवारका ४ जना सदस्य संग कुराकानी गरेका छौ । परिवारले सुख दुखका कुराहरु भाबुक हुँदै गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको गोरो परिवारमा सबैको आँखाको समस्या छ । आँखा राम्रो संग हेर्न नसक्नाले काम पनि कतै नपाएर कतिपय रात खान नखाई बसेको पनि उनले बताएकी छिन् । तलको भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरु देखिएको छ , सहयोग गर्नका लागि ९८१७०७०१६२ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।भिडियो हेरेर धेरै भन्दा धेरै सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दछौ ।
आमा । यो शब्दले जो-कोहीको हृदयमा स्नेह र श्रद्धा भरिदिन्छ । एक बृद्धले पनि जसै आफ्ना आमाको स्मरण गर्छन्, उनको आँखा रसिलो हुन्छ ।आमा एक संरक्षक र ममताको स्रोत हुन् । आमाको प्रेममा न स्वार्थ हुन्छ, न अपेक्षा । यस्तो प्रेम अरुबाट सायदै मिल्छ । त्यही कारण त आमाको प्रेममा हामी सजिलै पग्लिन्छौं । अतः आमा र छोरीको सम्बन्ध अरु गहिरो हुन्छ । किनभने छोरीका लागि आमा एक आमा मात्र होइनन्, घनिष्ठ साथी पनि हुन् ।